Puntlandtimes (Garoowe)-Dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa ku eedaysay maamulada ka jira Soomaaliya inay mas’uul ka yihiin dibudhaca doorashada madaxweynaha iyo barlamaanka Soomaaliya, kadib heshiisyadii lagu gaarey magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar tahay isla markaana maamulada qaar ay sababeen dibudhacyada socda maadaama ay dhegaysanayaan tabashooyinka musharixiinta mucaaradka ah.
Haddaba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa ka hadlay Mowqifka Puntland ee Doorashada Soomaaliya, kaddib eedaymaha ka imaanaya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kulamo uu maanta la qaatay wafti ka socda beesha caalamka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in la soo qabtay shaqooyin badan oo doorashada la xiriira ayna kuwa badan harsan yahiin, isla markaana guddiyada doorashooyinka la Magacaabay ay jiraan tabashooyin farabadan oo laga qabo, balse wada-hadallo ay socdaan.
“Dabcan howlo badan baa lasoo qabtay muddadii u danbeysay, heshiiskii 17-kii bisha 9-aad lagu galay Muqdisho Madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Madaxda Dowladdaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ah ay kuwada galeen Weli waxaa dhiman sidii howshaasi loo maamulihi lahaa oo dhinaca Doorashada iyo guddiyadoodii oo hadda gacanta lagu hayo, waxyaabo badan oo u baahan in la saxona ay ku jiraan, laakiin wadahadalo iyo shaqaa ka socota, ayuu yiri” Madaxweyne Deni.